စိတ်ဖိစီးမှုမြင့်မားသောသွေးဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သလား? | စစ်ဆေးမှု - သတင်း | ဇွန်လ 2022
မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုန်ပစ္စည်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေး ဖျော်ဖြေရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီသတင်း
အဓိက >> သတင်း >> ကူးစက်ရောဂါကသင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်
CORONAVIRUS UPDATE - ကျွမ်းကျင်သူများသည် Coronavirus ဝတ္ထုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူခြင်း၊ သတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပြောင်းလဲခြင်းများဖြစ်သည်။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ သွားကြည့်ပါ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ ။
အထူးသဖြင့် COVID-19 ကူးစက်မှုကြောင့် ၂၀၂၀ သည်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်စိန်ခေါ်မှုရှိသောနှစ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းဖြစ်ပွားမှုများဆက်လက်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှမမျှော်လင့်သောကျန်းမာရေးပြissuesနာများ - အပြင်ဘက်တွင်တိုးများလာသည် COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လက္ခဏာတွေ ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ အိပ်စက်ခြင်းပြproblemsနာများပျံ့နှံ့နေသည် ။ လူအများစုကသူတို့၏သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်နေကြောင်းတွေ့ရှိရခြင်းမှာအကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။
TO သို့သွေးပေါင်ချိန်စာဖတ်ခြင်းတွင်နံပါတ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာ - 120/80 mm Hg ။ နှလုံးခုန်နှုန်းအကြားအနားယူသောအခါပထမနံပါတ်သည်နှလုံးကျုံ့သွေးသည်လူတစ် ဦး ၏နှလုံးမှသွေးကိုဖိအားပေးသည့်အတိုင်းအတာကိုတိုင်းတာသည်။ ဒုတိယနံပါတ်၊ အရ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန (NIH) အရွယ်ရောက်သူများတွင်ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်သည် ၁၂၀/၈၀ အောက်သာရှိသည်။ ဖတ်ထက်တသမတ်တည်းပိုမိုမြင့်မားသောအခါ, ကသွေးတိုးရောဂါစဉ်းစားပါတယ်။
ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောသွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်းသည်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုမိုများပြားလာသည်ဟု DO မှဘုတ်အဖွဲ့မှအသိအမှတ်ပြုထားသောမိသားစုဆရာဝန် Danh Ngo မှရှင်းပြသည်။ Healthဒင်ကျန်းမာရေး ။ ထိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကြောင့်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်သောအကြောင်းရင်းကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ဆေးမှသည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများအထိ၎င်းကိုလျှော့ချရန်အဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။
လွန်ခဲ့သောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုယာယီမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ သင်ဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတဲ့အခါသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသင့်ကိုကူညီဖို့စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ Adrenaline သည်နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သွေးပေါင်ချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုတိုးစေသည်။ cortisol သည်သကြားဓာတ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်သင်၏ ဦး နှောက်မှဂလူးကို့စ်သို့ဝင်ရောက်စေမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ပန်းတိုင်? Fight-or-flight response သည်သင့်အားရိပ်မိခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်သင့်အား primes လုပ်သည်။ အန္တရာယ်လွန်သွားသည့်အခါသင်၏ဟော်မုန်းများနှင့်၎င်းတို့အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောစနစ်များကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပါ။ သင်၏စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုအမြဲတစေအသက်သွင်းသောအခါ၎င်းသည်နာတာရှည်သွေးတိုးရောဂါအပါအဝင်ပြofနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအရနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုယာယီမျှသာဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်သည် ၁၂၀-၁၂၉ အကြိမ်များစွာအကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။<80, and သွေးတိုးရောဂါ အများအပြားတသမတ်တည်းဖတ်> 130 /> 80 ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခု လေ့လာချက် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောအဖြစ်အပျက်များကိုကြုံတွေ့ခြင်းနှင့်စဉ်းစားခြင်းတို့သည်ပင်သွေးပေါင်ချိန်ကိုပြန်လည်နှေးကွေးစေကြောင်းပဏာမသက်သေအထောက်အထားကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အခြားလေ့လာမှုကထုတ်ဝေသည် American Heart Association ၏ဂျာနယ် , အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုမိုမြင့်မားရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုသွေးတိုးရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အချို့ သုတေသန ပင်အလုပ်နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ယောက်ျား၌တိုးမြှင့် diastolic နှင့်နှလုံးကျုံ့သွေးဖိအားအကြားဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းစသည့်သင်၏နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတဖြည်းဖြည်းရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
သင်၏ system ကိုအဆက်မပြတ်ရေလွှမ်းမိုးစေသောစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာသွေးစီးဆင်းမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ မိသားစုဆေးသမားနှင့် LaTosha Flowers, MD ၏အဆိုအရ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သောက်သုံးသောကောက်ရိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရောနှောနေသောကောက်ရိုးမှသောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်ဆင်တူသည် Med Concierge နှင့်အခြားအရာများ ။ သင်၏နှလုံးသည်ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်သွေးကိုဖိအားပေးရန်ကြိုးစားသောအခါသွေးပေါင်ချိန်တိုးစေသည်။ ဒေါက်တာ Flowers က cortisol မြင့်သောအခါသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သွေးပေါင်ချိန်သည်။
COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများ၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကိုတိုးပွားစေသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်၏အကြီးအကျယ်သေဆုံးမှုနှုန်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားပိတ်ဆို့မှုများနှင့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမြင့်တက်မှုများသည်သာမန်စိုးရိမ်စရာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ ဤကြီးမားသောစိတ်ခံစားမှုအားလုံးသည်သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းယန္တရားညံ့ဖျင်းခြင်းကအခြေအနေများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဆေးရုံစနစ်များသည် coronavirus ဝတ္ထုနှင့်ဖျားနာနေသောလူများကိုဂရုစိုက်ခြင်းကြောင့်ပုံမှန်ဆေးကုသမှုကိုနှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းပင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
ထိုအချက်များကိုအတူတကွထားရှိခြင်းသည်လက်ရှိသွေးတိုးရောဂါရှိသူများနှင့်ယခင်ကမထိတွေ့ခဲ့ဖူးသူများအတွက်သွေးပေါင်ချိန်အသစ်များပင်လျှင်မီးတောက်လောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သွေးတိုးရောဂါ၏စာရင်းတွင်ဖြစ်သောကြောင့်ဒါဟာစိုးရိမ်စရာလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ (CDC) COVID-19 မှပြicationsနာများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ။ ဤရောဂါဖြစ်ပွားမှုသည်သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့ဖြစ်သည်။
မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဆရာ ၀ န်တစ်ယောက်အနေဖြင့် COVID-19 ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောသွေးတိုးရောဂါနှင့်ဆက်ဆံနေသောလူများနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည်မှာဒေါက်တာ Flowers သည်သူမလေ့ကျင့်ခန်းတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာများကိုရှင်းပြသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်မသိသောလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်လူအများကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ ဒုတိယအချက်မှာလူများသည်မိသားစု ၀ င်များ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ အလုပ်ဖော်များနှင့်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးမှုများအလျင်အမြန်သေဆုံးခြင်းနှင့်အတူလူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျစေသည်။
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်သွေးတိုးရောဂါမြင့်တက်လာခြင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသည့်ဘဏ္financialာရေးမတည်ငြိမ်မှု၊ လူမှုရေးအထီးကျန်မှုနှင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများကိုကန့်သတ်ခြင်းစသည့်အဓိကဖိအားများနှင့်အနာဂတ်တွင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမသေချာမရေရာမှုများကျယ်ပြန့်စွာရှိနေသည်ဟုဒေါက်တာဖလိုရာကပြောသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါသည်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးမှလူတို့၏ဘ ၀ တွင်အဓိကအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု Beverly Hills နှင့်ပူးတွဲတည်ထောင်သူမှရင်သားကင်ဆာခွဲစိတ်ဆရာဝန် Paris Sabo ကရှင်းပြသည်။ ဒေါက်တာ Brite ။ ဤရွေ့ကားစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်။ ဤခံစားချက်များသည်နာတာရှည်သွေးတိုးခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းမဟုတ်သော်လည်း၊ သူတို့သည်ကျန်းမာသောလူများတွင်ပင်သွေးပေါင်ချိန်ကိုခေတ္တမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
မသေချာမရေရာသည့်အချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်သည့်ရေတိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့သည်ရေရှည်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်လူတို့အားဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်အလေ့အထများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ထိတွေ့မှုကိုရှောင်ရှားရန်နှစ်စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ထပ်မံခွဲစိတ်ကုသခြင်းကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သောအခါတစ်ချိန်ကစစ်ဆေးခဲ့သောသွေးပေါင်ချိန်သည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ဒေါက်တာ Ngo ကမှတ်ချက် - ကူးစက်ရောဂါအထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်းရုံးသို့လာရောက်လည်ပတ်မှုသည်များပြားလာခြင်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်မထိန်းချုပ်သောလူနာရာခိုင်နှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တိုးတက်ခြင်းတို့ကိုပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများသောအခြေအနေများနှင့်မသေချာမရေရာမှုများတိုးများလာခြင်းနှင့်အတူသွေးပေါင်ချိန်သည်ဤကာလအတွင်းပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။ အိမ်တွင်းသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းမရှိသောသူများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည်ပင်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဆေးဆိုင်များနှင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်ဤရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွင်းဤ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလက်လှမ်းမီခြင်းကန့်သတ်ထားသည်။
4. COVID-19 ပြcomplနာများအားနည်းခြင်း
သွေးတိုးရောဂါရှိခြင်းသည် COVID-19 ကူးစက်ခြင်းကိုမဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဒေါက်တာဖလိုရာကပြောကြားသည်။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောသွေးတိုးရောဂါမှနှလုံးရောဂါများစွာရှိသည်ဆိုပါကရောဂါကူးစက်မှု၏နောက်ဆက်တွဲရောဂါများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုထိခိုက်လွယ်ပြီးရှင်သန်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။ ရှုပ်ထွေးမှုများအစွန်အဖျားရှိအဆုတ်များ၌ဖြစ်စေ၊
ထို့အပြင်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်းသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေမြင့်မားစေသည်။ CDC တွေ့ရှိချက်များအရ COVID-19 သည်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်၊ myocarditis သို့မဟုတ် pericarditis ဟုလူသိများသောနှလုံး၏အဖုံးရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်သွေးတိုးရောဂါကြောင့်အားပျော့နေသောစနစ်တစ်ခုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသင်၏သွေးပေါင်ချိန်အတက်အကျကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာဖြစ်လျှင်၊ စိုးရိမ်စိတ်ကိုသောက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်ဟုယူဆခြင်းသည်သဘာဝကျပါသည်။ စဉ်တွင် သုတေသနအချို့ ဒါဟာအချို့သောဖြစ်ရပ်များအတွက်အသုံးဝင်မယ့်ကဖော်ပြသည်ကပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းကုသမှုစဉ်းစားမရ။ အရာရာကိုထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ရောက်ရန်ဤသက်သေပြဆေးညွှန်းနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုစမ်းကြည့်ပါ။
သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်ထိုကဲ့သို့သောဆေးဝါးများသောက်ရန်အကြံပြုလိမ့်မည် ACE inhibitors , မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်နှင့်၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။ အကယ်၍ သင်၏သွေးပေါင်ချိန်သည်ပုံမှန်ထက်ပုံမှန်ထက်မြင့်မားပါကမူလစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူနှင့်စကားပြောခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည် (အထူးသဖြင့်) ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း။
သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုဖတ်ရန်ထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသင့်ကိုသွေးတိုးရောဂါဖြစ်စေလျှင်စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်၏စိတ်ခံစားမှုများသည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိဟုခံစားရသောအခါကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကသင့်အားဖြေရှင်းရန်နည်းဗျူဟာများတည်ဆောက်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ သင်ပိုမိုစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုလက္ခဏာများကိုသတိပြုမိပါကသင်၏မူလစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံမှကုသမှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ကိုရှာဖွေပါသို့မဟုတ်ကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပါဟုဒေါက်တာငိုကအကြံပြုသည်။
အစားအသောက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဒေါက်တာ Ngo ကသင့်အားအကြံပေးသည် -
ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းလျှော့ချခြင်းတို့သည်သူတို့၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
သင်၏အိမ်တွင်သင်၏သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးရန်အလိုအလျှောက်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာရန်သေချာစေရန်ဒေါက်တာငိုကအကြံပြုသည်။ တစ်ခုဝယ်ယူ အိမ်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာအစုံမှာ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့နှင့်ဖတ်ရှုခြင်းကိုမျှဝေခြင်းသည်သွေးပေါင်ချိန်သို့ရောက်ရန်သင်၏ဆေးကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားစိုးရိမ်မှုများရှိပါက COVID-19 ကြောင့်သာအရေးပေါ်အကူအညီရယူရန်နှောင့်နှေးခြင်းမပြုပါနှင့်။ အရေးကြီးတာကရုံးလည်ပတ်မှုဒါမှမဟုတ် telemedicine လည်ပတ်မှုကနေဖြစ်စေပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုအချိန်ဇယားဆွဲပါ။
ကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေသောကာလအတွင်းနေထိုင်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပြင်းထန်သောဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုသည်ပုံမှန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည်မဟုတ်ချေ။ ရောဂါလက္ခဏာအသစ်များကိုလျစ်လျူမရှုပါနှင့်၊ သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိုးနိုးကြားကြားရှိပါ။ သင်၏အိမ်မှဆေးကုသမှုခံယူရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
ဆရာဝန်မပြဘဲ chantix ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ
ငါ ibuprofen ဘယ်လောက်နေ့စဉ်သောက်နိုင်သလဲ